Zvemukati Curation Zvishandiso kubva kuMisa Kukosha
Kukosheswa kweMisa: Maturusi Ekuwedzera Zvemukati Kuratidzwa
Mugovera, Nyamavhuvhu 4, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vamwe venyu vangave muchibvunza kuti chii chemukati curation. Pane vhoriyamu isina musoro yezvinyorwa zviri kuburitswa pawebhu kuburikidza neTwitter, Facebook, mablog, nhau, Youtube nemamwe masvikiro. Mikana ndeyekuti zvimwe zvemukati izvo zvakakosha kune vateereri vako - asi zvinoda zvimwe kuongorora, kusefa uye kuratidza nenzira inobatsira. On Martech Zone, tinogadzirisa zvakawanda zvemukati. Mumwe muenzaniso ndeye infographics. Kunyange isu tichiwana imwe yadzo, isu tinongwarira kuongorora, kusefa, kuongorora uye kutsanangura kuti nei zvichishanda kune vateereri vedu uye kuti maonero edu angave api.
Zvemukati Kuratidzira zvinogona kubatsira zvakanyanya kune yako mhando uye saiti shanduko zvakare. Fungidzira kana iwe uchigona kuwedzera mhenyu chikafu chemagariro makomendi, wongororo uye ma tweets kune rako repamba peji kubva kune vanofara vatengi mune chaiyo-nguva. Izvo zvakakosha zvemukati ... uye pamwe zvine simba zvakanyanya kupfuura chiyero chipupuriro block kana mutengi logo. Izvi zvinoda zvemukati zvekugadzira maturusi.
Icho chiito chemukati curation chakanyanya zviwanikwa zvakanyanya. Tiri mukati mehofisi medu, isu tese tinoverenga akawanda masosi ezuva nezuva, kuve nehukama hwekutarisa tichisundira ruzivo kwatiri nezvevatengi vedu nevanokwikwidza navo, uye Google inonyevera kuongorora zvinyorwa zvitsva kuburikidza newebhu. Tinoshanda nesimba kubiridzira chimwe nechimwe chezvinhu izvi mune mamwe mapfupi eruzivo atinogona kutumira kune vatengi vedu kuti vagare vachiziva zvinhu. Zvinoda musanganiswa wehungwaru, ruzivo uye tekinoroji kuti zviitwe nemazvo ... uye chiitiko chinofamba chiri kuramba chichichinja.
Muenzaniso wakanaka wequati curation ndeyekuti terevhizheni inoratidza sei kushambadzira kwe twitter izvo zvingave zvinozivikanwa nevanoona vateereri. Maitiro acho haasi nyore - ma tweets anoda kuve akakodzera, asinganetsi uye anovaraidza.
Kukosha kweMisa gore rakavakirwa papuratifomu iyo inobvumidza vashambadziri uye midhiya kukwikwidza mavhoriyamu akakura ezvinyorwa uye vozvishandisa kune vateereri vavo. Iyo Mass Relevance chikuva inoburitsa zviripo zvinoenderana kubva kuTwitter uye mamwe masocial network, inosefa nhaurwa dzakaburitswa pamushandisi yakatsanangurwa mitemo, uye inogadzira kutaridzika kwevashambadziri kuti vapinze muwebhusaiti, uye inosanganisa muma mobile apps, kuratidza paTV skrini, kunama munzvimbo dzezvitoro. , kana kuita chero chimwe chinhu.
Kukosha kweMisa inopa mutengesi akateedzana ezvishandiso zvakavakirwa-kare kana ma module, anoshanda akazvimiririra neakazvipira mushandisi interface, kana sechikamu cheplatform hombe inosanganisa maviri kana anopfuura ma module.
Zvishandiso kana ma module aripo anosanganisira:
Amplification Zvigadzirwa senge Misa Ratings kutora yakatumirwa nyeredzi ratings uye Misa Kutaura kutora kugovana munharaunda.
Kubatanidzwa zvigadzirwa zvakadai se Mass Maitiro iyo inofungidzira zviitiko zvemagariro zviitiko, Nzizi dzeMisa iyo inodzora hurukuro dzezvemagariro uye sarudza chaiyo kuratidzwa, Misa Garari iyo inogadzira inowirirana yemadziro madziro nemifananidzo kubva kwakasiyana kwenzizi nzizi, Misa Leaderboard iyo inopa chinzvimbo chemagariro uye inosimudzira inonyanya kushama munharaunda yevateereri, Mamepu eMisa iyo inoratidza zvemukati zvemagariro nenzvimbo, Misa Makira iyo inojekesa huwandu hwehuwandu hwezviitiko zvevanhu zvinoitika.
Kudyidzana zvigadzirwa zvakadai Mhinduro dzeMisa iyo inobvumira vashambadziri kutumira zvakananga kune vateereri uye kudzora mhinduro hova uye Misa Polls iyo inogonesa kuvhota munharaunda.
Kukosha kweMisa inopa anotevera akagadzirira mhinduro kusanganisa imwe kana anopfuura maturusi ari pamusoro:
Shamwari iyo inosanganisa zvine simba zvemukati pasocial media.
kondakita iyo inosanganisa zvemukati zvemusoro wenyaya kana chigadzirwa.
Flock-To-Kuzarura kugovera zvakasarudzika zvemukati zvinowanikwa kuburikidza nekutora chikamu kwenharaunda
Zeitgeist dhibhodhi rakapetwa rakasiyana-siyana iro rinopa huwandu hwezviitiko zvese zvemagariro nenzira yakarongeka uye iri nyore kudzora
kushandisa Kukosha kweMisa, vatengesi vanogona kudzora kana kuenzanisa zvese zvinoitika zvine chekuita nechiratidzo munzvimbo yemagariro enhau. Iwo mabhenefiti ekubatanidzwa akapfuudzwa kune vatengi uye tarisiro inowedzera ruzivo rwavo uye inopa mukana wekubatana zvirinani.
Tags: content curationcurationkukosha kwakawandatwitter curation
Blur Kushambadzira Shanduko: Pitch, Tsvaga, Ita
Zvikanganiso ndeako Wako SEO Muvengi